ရှင်းကျန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှင်းကျန်း-ဝီဂါ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (တရုတ်: 新疆维吾尔自治区၊ ဝီဂါ: شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى) သည် တရုပ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတခု ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ရှိပြီး ဗဟိုအာရှနှင့် နီးသည်။ တရုပ်ရှိ ပြည်နယ်အဆင့် နယ်မြေအပိုင်းအခြားများအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့်ယှဉ်လျှင် (၈) ခုမြောက် အကြီးဆုံးတည်း။ အကျယ်အဝန်း ၁၆၀၀၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၆၂၀၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) ရှိပြီး လူဦးရေ ၂၅ သန်းခန့် နေထိုင်သည်။ 
ရှင်းကျန်းနှင့်ထိစပ်နေသော နိုင်ငံများမှာ မွန်ဂိုလီးယား၊ ရုရှား၊ ကာဇက်စတန်၊ ကာဂျစ္စတန်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ အာဖဂန္နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်နှင့် အိန္ဒိယတို့ ဖြစ်သည်။ ကာရာကိုရမ်၊ ကွန်လွန်နှင့် တီအန်ရှန်းတောင်တန်းများသည် ရှင်းကျန်း၏ အနောက်ဘက်နှင့် တောင်ဘက်နယ်စပ်များကို ခြံရံထားသည်။ ရှင်းကျန်းနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အက်ဆိုင်ချင်နှင့် ကာရာကိုရမ်တိုးချဲ့မြေတို့ကို အိန္ဒိယမှလည်း ၎င်းပိုင်မြေအဖြစ် အထောက်အထားသွင်းလျက် ရှိသည်။ နိုင်ငံတွင်းပြည်နယ်များဖြစ်သော တိဘက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဂန်ဆုနှင့် ကျင်းဟိုင်တို့သည်လည်း ရှင်းကျန်းနှင့် ထိစပ်နေသည်။ သမိုင်းဝင် နာမည်ကျော် ပိုးလမ်းမသည် ပြည်နယ်၏ အရှေ့မှအနောက်သို့ ဖြတ်သန်းသည်။
လူမျိုးစုအမျိုးမျိုးတို့ ဇာတိဖြစ်ပြီး တာကစ်၊ ဝီဂါ၊ ကာဇက်၊ ကာဂျစ်၊ ဟန်၊ တိဘက်၊ ဟွေ၊ တာဂျစ်၊ မွန်ဂို၊ ရုရှားနှင့် ဆိုင်ဘေ (တရုပ်တို့က ရှီဘို ခေါ်) လူမျိုးများ နေထိုင်သည်။  လူမျိုးစုအလိုက် တဒါဇင်မျှရှိသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေများ သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသော သမိုင်းဟောင်းတို့တွင် ဤဒေသကို တရုပ်တာကက်စတန်၊ အရှေ့တာကက်စတန်၊ အရှေ့တာကီစတန် ဟူ၍ ရေးသည်။ နယ်မြေ၏ ၉.၇% မျှသာ လူနေနိုင်သော မြေများဖြစ်သည်။ 
၁၉၉၀ ဝန်းကျင်မှ ၂၀၁၀ ကာလများထိ အရှေ့တာကက်စတန် လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ခွဲထွက်ရေးပဋိပက္ခများနှင့် အစွန်းရောက်အစ္စလာမ်ဝါဒများရှိကာ ဒေသတွင်း မငြိမ်မသက်။ ရံဖန်ရံခါဆိုသလို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများရှိပြီး ခွဲထွက်ရေးအုပ်စုများနှင့် အစိုးရတပ်များအကြား တိုက်ပွဲများလည်း ရှိခဲ့သည်။  ယင်းတို့ကို ပြေလည်ရန် တရုပ်အစိုးရသည် ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများကို ဒေသတွင်း၌ တည်ဆောက်ကာ မူဆလင်လူထုအား ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများစွန့်လွှတ်ရန် တွန်းအားပေးခြင်း၊ လူမျိုးရေးခံယူချက်တို့ကို ပျောက်ကွယ်အောင် ဖိအားသုံးခြင်းတို့ ပြုကာ နိုင်ငံချစ်စိတ်တခုသာရှိစေရန် အားထုတ်သည်။  ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်တို့ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့က ဝီဂါလူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုဟု ပေါင်းစည်းခေါင်းစဉ်တပ်သည်။ 
↑ "National Data". Archived from the original on 15 April 2020. Retrieved 16 September 2020.
↑ "Regions and territories: Xinjiang". BBC News.7May 2011. Archived from the original on 20 May 2011.
↑ 新疆绿洲面积已从4.3%增至9.7%. 人民网 (in Chinese). Archived from the original on 11 October 2017. Retrieved 27 May 2017.
↑ "East Turkestan: Chinese Authorities Confiscate Passports Amid Security Crackdown". Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO). 21 October 2016. Archived from the original on 30 October 2016. Retrieved 29 October 2016.
↑ Beydoun, Khaled A. "For China, Islam isa'mental illness' that needs to be 'cured'". Al Jazeera. Archived from the original on 10 December 2018. Retrieved 10 December 2018.
↑ "Uighurs: 'Credible case' China carrying out genocide". BBC News. 8 February 2021. Retrieved 8 February 2021.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှင်းကျန်း&oldid=672837" မှ ရယူရန်
၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။